यस्तो पो वडाध्यक्ष ! – Nepal News
यस्तो पो वडाध्यक्ष !
दाङ, वैशाख २९ । ‘फुर्सद कत्ति छैन् । योजना कार्यान्वयन तीब्र गतिमा छ । ति स्थानमा पुग्नै पर्छ । वडा कार्यालयबाट दिने सेवामा पनि ध्यान दिनै प¥यो ।’ एक अशल सेवकको रुपमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष बिमबहादुर केसी परिचित छन् ।
खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको नेतृत्वमा पुगेदेखि नै जनताको मनमा बिमबहादुर केसी बस्न सफल भएका हुन् । जनताको भावना अनुसार चल्न सक्ने क्षमता उनमा छ । त्यही भएर उनको टिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भयो ।
वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि जनताकै घर आगनमा अध्यक्ष पुग्दै आएका छन् उनी । ‘जनताको भावना अनुसार हामि चल्नुपर्छ । चल्छौं पनि । यो वर्ष चुनावी वर्ष भयो । तर, हामिले काम गरेका छौं । अव आउँदो वर्षदेखि महशुस हुनेगरी काम हुन्छ’ उनले भने ‘जनतालाई आय आर्जनमा समाहित गरेर समृद्धि नगरबनाउने अठोट छ ।’
लमही नगरपालिका वडा नं. ५ को अधिकांस क्षेत्र बजार क्षेत्रमा पर्छ । तर, यस वडामा ग्रामीण क्षेत्र पनि छ । जहाँ पूर्वाधार विकासको खाँचो छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्नो ठाउँको विकास गर्न आफै योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ । सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना अनुरुप कामहरु भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वडा नम्बर ५ मा विनियोजन भएको मध्य ६० प्रतिशत योजनाको काम सकिएको छ । बाँकि ४० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वडा अध्यक्ष बिमबहादुर केसीले बताए ।
‘हाम्रो प्राथमिकता सडक पूर्वाधार हो । त्योसँगै किसानहरुको खेत बारीसम्म पुग्ने कुलो निर्माणमा जोड गरेका छौं’ वडा अध्यक्ष केसीले भने ‘वडामा आएको बजेट मध्य २० प्रतिशत रकम लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि र आय आर्जनका तालिममा लगाएका छौं ।’
लमही–कोइलाबास सडक निर्माणाधिन छ । यो सडक कोलहीसम्म आइपुगेको छ । गोलघरबाट प्रहरी कार्यालयसम्मको सडक पक्कि गर्न नगरविकास समितिले टेण्डर गरिसकेको छ । बजार क्षेत्रमा देखिएको सडक समस्या अव समाधान हुने चरणमा छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालयको एक करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ्ग थियो । ८० लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा र २० लाख लक्षित वर्ग कार्यक्रममा रहेको थियो । अहिले योजनाहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् ।
पूर्वाधार विकासमा ३४ वटा योजनाहरु थिए । जस मध्य अन्य सम्पन्न भैसकेका छन् भने बाँकि ६ वटा योजना कार्यान्वयनमा रहेको वडा अध्यक्ष केसीले बताए । ‘जनताका आवश्यकता धेरै छन् ।
ति आवश्यकताहरु पूरा गर्न जरुरी पनि छ । हामिहरु योजना बद्ध रुपमा लागेका छौं । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ठूला र दीर्घकालीन महत्वका योजना ल्याउछौं’ केसीले भने ‘सडक पूर्वाधारलाई अझ विस्तार गर्छौं, वडा नम्बर ५ को सबै बस्ती सडकले जोडिन्छ । पक्कि सडक पहिलो प्राथमिकता हो ।’
नगरपालिकाबाट वडा नं. ५ मा विभिन्न योजनाहरुमा एक करोड ४६ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । आदर्श टोल र गोरक्ष टोलमा कालोपत्रे सडक निर्माणको योजना रहेको छ । गोरक्ष टोलमा सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । आदर्श टोलमा कालोपत्रको काम जारी छ ।
अजम्मरी सामुदायीक वनमा भ्यू टावर निर्माणका लागि २० लाख बजेट छ । यो योजनाको काम चालु छ । बजार क्षेत्रमा सोलार बत्ति जडानको लागि १५ लाख बजेट रहेको र त्यो कामको लागि टेण्डर आह्वान भैसकेको छ ।